Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin's Wedding on 16 Jan @ Sedona | Myanmar Celebrity Couple Photos
အဖြူရောင် မင်္ဂလာ ၀တ်စုံ နဲ့ သတို့သား ပြေတီဦး အဖြူရောင် မင်္ဂလာ ၀တ်စုံ နဲ့ စိန်ရောင် တဖျက်ဖျက်လတ်နေတဲ့ သတို့သမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်
"အဘကို ဓာတ်ပုံ လှအောင် ရိုက်ပေးနော်" ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဆန်း နဲ့ ဇနီး ပန်းရောင် ပွဲတက် ၀တ်စုံ နဲ့ ပွဲတက်လာတဲ့ ရန်အောင်
ခန်းမအတွင်း ၀င်ရောက် သတင်းယူခွင့် မရလို့ အပြင်မှာ ရပ်စောင့်နေတဲ့ သတင်းသမားများ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာပွဲကို ဒီကနေ့ (၁၆ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၁) Sedona Hotel မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ သတို့သား နဲ့ သတို့သမီး နှစ်ယောက်စလုံး အဖြူရောင် မင်္ဂလာဝတ်စုံ၊ အဖြူရောင် လက်ဝတ်ရတနာ (စိန်) များကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ သတင်းဓာတ်ပုံ ယူမည့် စာနယ်ဇင်းသမားများကို ဧည့်ခံမင်္ဂလာ ခန်းမထဲသို့ ၀င်ရောက် သတင်းရယူခွင့် မပေးခဲ့ဘဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အ၀င်ပေါက်မှဘဲ သတင်းရယူစေခဲ့တာပါ။ ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ စုလျားရစ်ပတ် မင်္ဂလာပွဲသို့ မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်း နဲ့ ဇနီး နှင့် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဆန်း နဲ့ ဇနီး တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။
siangJanuary 16, 2011 at 10:00 AMi really really hate like that .........two of you so stupid ,,,,,,,,,,pls don't put their news in cele brity .........unlucky...are they really use real diamond......instead of using diamond ,it will be better they donate poor people ..and doing social work ,,,stupid ,,,,,,they think they are vey richa..hahhhhhh...if the hollywood popular know about that ,this is funny for them hahahhahaha ............really relly unlucky....they are same with stupid and low-born myanmar govermentReplyDeleteauJanuary 16, 2011 at 11:55 AMWayyyyyyy!!!!!!!!Dunt be jealous....... Anyway they are celebrities...and this is their wedding...and i think some business man gave sponsor for their wedding...ReplyDeletetharJanuary 16, 2011 at 2:26 PMဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနဲ့ လမ်းဘေးက သူတောင်းစားတောင် အဆင့်အတန်းကွာသေးတာပဲကွာ။ ငါတို့နိုင်ငံလည်း ချမ်းသာတဲ့ သူရှိတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ReplyDeletemaythwayJanuary 16, 2011 at 5:48 PMyes.. this is sponsor by shwe nan taw & she shin!we shout be wish for them..don!t be jealous..ReplyDeleteMs. KhaingJanuary 16, 2011 at 10:32 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMs. KhaingJanuary 16, 2011 at 10:34 PMအဲဒီ donate လုပ်ပါလို့ အော်နေတဲ့သူတွေကော သူတို့ အကျိုးအတွက်မသုံးဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီး ဘယ်လောက်များလှူပြီးပြီလဲ သိချင်လိုက်တာနော်...လူဆိုတာသူ့ ကုသိုလ်ကံနဲ့ သူပဲ...ချမ်းသာတဲ့သူရှိသလို ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းရှိမှာပဲမုဒိတာပွားပေးတာက ပိုကျက်သရေရှိပါတယ်..ဒါကလည်း သူတို့ စိန်တွေမှမပာုတ်တာ....sponsor ပေးတဲ့အတွက်ဝတ်တာပါပဲReplyDeleteSunny SmileJanuary 17, 2011 at 4:09 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeletethuJanuary 19, 2011 at 3:26 AMAu! ur right! Dont be jealous Siang!ReplyDeleteAdd commentLoad more...